यी हुन जीत्नकै लागि जन्मिएका ३ राशी ! हरेक क्षेत्रमा हुन्छ उनीहरुकै राज ! - Butwalkhabar
By butwalkhabar	 Last updated Jul 9, 2019 0
हरेक व्यक्तिको सफलताको कारक भनेको नै ग्रह र राशी हो । हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने जो कोहीले आफ्नो राशीलाई विश्वास गर्ने गर्छन् । व्यक्तिको सफलता भाग्यसँग मात्रै जोडिएको नभएर दृढ संकल्प, अत्मविशवाससँग पनि जोडिने गर्छ। जन्म कुण्डलीमा वृहस्पति , मंगल र शनि शुभ स्थितीमा हुने व्यक्तिलाई कहिले पनि जीत मात्रै प्राप्त हुने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । हेरौँ कुन कुन हुन त ती राशीहरु ।
शनिवार भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, शनिको दशा लाग्नेछ !
जतिनै खुल्ला मनको भए पनि यि कुराहरू चही सधैं गोप्यनै राख्नु पर्छ,नत्र परिन्छ फन्दामा
गोजीबाट रुपैया खस्यो वा हरायो भने यस्तो हुन्छ बुझ्नुहोस
गुल्मी पहिरो अपडेट : १० जनाको मृत्यु
गुल्मी पहिराे अपडेट : मृत्यु भएका ६ जनाकै पहिचान, ६ भन्दा बढि अझै बेपत्ता
जापान जानलाई भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ ? त्यासो हो भने केही समय पर्खनूहोस्, किनकी
पेट घटाउन चाहनुहुन्छ ?त्यसोभए यी ७ घरेलु खानेकुरा खानुस् ,के के हुन् ?
जन्डिस हुँदा बेसार र तेल ‌‌खान हुन्छ कि हुँदैन ? हेर्नुहोस त छक्क पर्नुहुनेछ